April 2012 | ြမန်မာစာ ြမန်မာစကား
at Thursday, April 26, 2012 – 1 မှတ်ချက်ေလးေတွ
ြမန်မာ အက္ခရာတွင် ဗျည်း​ (၃၃) လံုး​ဟူ၍ ရှိပါသည်။ အဆိုပါ ဗျဉ်း​ (၃၃) လံုး​အနက် ဖဦး​ထုပ် (ဖ) ၏ ​ေနရာသည် နံပါတ် ဘယ်​ေလာက်မှာ ရှိသလဲ ဆိုလျှင်​ေတာ့​ ရုတ်တရက် ​ေြဖနိုင်သူ ရှား​လိမ့်​မည် ထင်ပါသည်။
ထိုအခါ ကျွန်​ေတာ့်​ကို ​ေတွ့​သည့်​ ​ေနရာတွင် အချိန်မ​ေရွး​ ​ေကာက်ကာငင်ကာ ​ေမး​ြကည့်​လိုက်ပါ။ ဖဦး​ထုပ် နံပါတ် (၂၂) ဟု ဒက်ခနဲ မဆိုင်း​မတွ ​ေြဖလိုက်မည်။ ထိုအတွက် တယ်ဟုတ်ပါလား​ဟု ကျွန်​ေတာ့်​ကို အလွယ်တကူ အထင်မြကီး​ လိုက်ပါနဲ့​ဦး​။
ဖဦး​ထုပ်နှင့်​ ကျွန်​ေတာ် ဆက်နွယ်ပတ်သတ်ခဲ့​ပံုကို သိရ​ေလ​ေအာင် ဦး​စွာ ​ေစာင့်​ြကည့်​လိုက်ပါဦး​။
ကျွန်​ေတာ်ရယ်….. ဖဦး​ထုပ်ရယ် … ဆရာမြကီး​ ​ေဒါ်စန်း​ရီရယ် ….။
ယခု​ေခတ် က​ေလး​များ​ မူလတန်း​ အဆင့်​တွင် ပညာ သင်ြကား​ရသည့်​ ကာလ (၅) နှစ် ရှိသည်ဆိုပါလျှင် ကျ​ေနာ်တို့​ ​ေခတ်အခါက ၆ နှစ်တာ သင်ြကား​ရ ပါသည်။ သူငယ်တန်း​ေလး​၊​ သူငယ်တန်း​ြကီး​၊​ ပထမတန်း​၊​ ဒုတိယတန်း​၊​ တတိယတန်း​၊​ စတုတ္ထတန်း​တို့​ ြဖစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူငယ်တန်း​မှာ (၂)နှစ် ​ေနရြခင်း​ ြဖစ်၏။ သူငယ်တန်း​ေလး​ (၁) နှစ်​ေန၊​ ​ေအာင်ြပီး​မှ သူငယ်တန်း​ြကီး​မှာ ​ေနာက်တနှစ် ထပ်​ေနရပါသည်။
ကျွန်​ေတာ် သူငယ်တန်း​ြကီး​ ​ေကျာင်း​သား​ ဘဝဆို​ေတာ့​ အသက် (၇) နှစ် အရွယ်​ေပါ့​။ တ​ေန့​ေတာ့​ ဆရာမက အတန်း​ေရှ့​ သင်ပုန်း​ြကီး​တွင် ​ေြမြဖူြဖင့်​ ​ေရး​ထား​ေသာ ဗျည်း​ (၃၃) လံုး​ကို ြကိမ်လံုး​နှင့်​ ​ေထာက်၍ တ​ေယာက်ြပီး​ တ​ေယာက် ရွတ်ဆို ခိုင်း​ပါ သည်။ ကျွန်​ေတာ် အလှည့်​တွင် ကြကီး​၊​ ခ​ေခွး​၊​ ဂငယ်ြဖင့်​ အစပိုင်း​ေတာ့​ ြဖူး​ေန​ေလ၏။ သို့​ရာတွင် မည်သို့​ ြဖစ်သည် မသိ၊​ တ​ေနရာ အ​ေရာက် အက္ခရာကို ကျွန်​ေတာ် အစရှာ၍ မရ​ေအာင် ြဖစ်​ေနပါသည်။
ဆရာမြကီး​ကလည်း​ ဆို​ေလ ဆို​ေလဟု သတိ​ေပး​ေန၏။ ထိုသို့​ြဖစ်​ေလ ကျွန်​ေတာ့်​မှာ စဉ်း​စား​ မရ​ေလ ြဖစ်ရ​ေတာ့​သည်။ အတန်း​ တတန်း​လံုး​ကလည်း​ ြငိမ်သက်​ေန၏။ ကျွန်​ေတာ့်​ကိုပဲ အာရံုစိုက် ​ေနြကသည်။ ဆို​ေလဟု ဆရာမြကီး​က ​ေြပာြပန်ပါသည်။ ကျွန်​ေတာ် ​ေချွး​ပျံလာသည်။ တကိုယ်လံုး​ ထူပူလာသည်။ ကျွန်​ေတာ့်​ စိတ်ထင် နာရီဝက်​ေလာက်​ေတာင် ြကာသွား​ပါသည်။ ကျွန်​ေတာ် ဘယ်လိုမှ အစ​ေဖာ်၍ မရ။ ဒါ​ေလး​ေတာင် ​ေမ့​ရပါမည်လား​ဟု ဆရာမြကီး​ ​ေဒါကန်သွား​ ပါသည်။
သူငယ်တန်း​ြကီး​ ​ေရာက်​ေန သည့်​တိုင် ဗျည်း​ (၃၃) လံုး​ကို​ေသာ်မှ ​ေြကညက်မှု မရှိ​ေလ​ေသာ ကျွန်​ေတာ်ကို ဆရာမြကီး​ ​ေဒါကန်မည် ဆိုလည်း​ ကန်ထိုက်ပါ​ေလသည်။ သို့​အတွက် ဆရာမြကီး​ ကျွန်​ေတာ့်​ကို သူ့​ထက်ထဲမှ ြကိမ်လံုး​ြဖင့်​ ရိုက်နှက်ြခင်း​ မြပုခဲ့​ပါ။ ကျွန်​ေတာ့်​ ဘဝတသက်တာ သင်ခန်း​စာ ရ​ေစမည့်​ အြပစ်​ေပး​ြခင်း​မျိုး​ြဖင့်​ အြပစ်​ေပး​ခဲ့​ပါသည်။
'​ေမာင်​ေကျာ် … လွယ်အိတ်ယူ။ သူငယ်တန်း​ေလး​ ြပန်ဆင်း​၊​ ဒါကိုမှ မင်း​မသိ​ေသး​ေတာ့​ မင်း​နဲ့​ သူငယ်တန်း​ြကီး​နဲ့​ မတန်​ေသး​ဘူး​´ တဲ့​။ ြပီး​ေတာ့​ အတန်း​သား​များ​ဘက် လှည့်​၍လည်း​ ​ေြပာပါ​ေသး​သည်။ `အဲဒါ ဘာအက္ခရာလဲ´ ​ေြပာြပလိုက် ြကစမ်း​တဲ့​။ `ဖ ဦး​ထုပ်ပါ ဆရာမ´ ဟု တတန်း​လံုး​က ဝိုင်း​ေအာ်ြကသည်။
ထို​ေန့​က သူငယ်တန်း​ေလး​မှာ ကျွန်​ေတာ် သွား​ထိုင် ရပါသည်။ သူငယ်တန်း​ေလး​နှင့်​ သူငယ်တန်း​ြကီး​က ဒူး​ပိတ်ဟု ​ေခါ်​ေသာ အရံအတား​ေလး​ တခုသာ ြခား​ထား​ပါသည်။ ဆရာမြကီး​က အတန်း​နှစ်ခု အလယ်ထိပ်မှာ ထိုင်ြပီး​ နှစ်တန်း​လံုး​ကို သင်ရပါသည်။
ရှက်လိုက်သည်မှာ ​ေြပာဖွယ်မရှိ။ ကျွန်​ေတာ် ​ေခါင်း​ကို မ​ေဖာ်​ေတာ့​ပါ။ သူငယ်တန်း​ြကီး​မှာ ကျန်​ေနခဲ့​ေသာ ကျွန်​ေတာ့်​ သူငယ်ချင်း​ေတွကလည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ကို မျက်လံုး​အမျိုး​မျိုး​နှင့်​ လှမ်း​ြကည့်​ ြကပါသည်။ ဂရုဏာသက်​ေသာ၊​ ​ေလှာင်​ေြပာင်လို​ေသာ၊​ အထင်အြမင်​ေသး​ေသာ မျက်လံုး​များ​ ြဖစ်လိမ့်​မည်ဟု ယခု အချိန်မှာ ကျွန်​ေတာ် စဉ်း​စား​ ြကည့်​မိပါသည်။
သူငယ်တန်း​ေလး​မှာ ယခုနှစ်မှ ​ေကျာင်း​သို့​ ​ေရာက်လာသူ​ေတွ ြကား​ထဲ ထိုင်​ေနခဲ့​ရသည်။ ​ေကျာင်း​ဆင်း​ ​ေခါင်း​ေလာင်း​ ထိုး​၍ အိမ်ြပန်ရသည့်​အခါ ယခင်​ေန့​ေတွကလို ကျ​ေနာ် မ​ေပျာ်​ေတာ့​ပါ။ ​ေဖ​ေဖနှင့်​ ​ေမ​ေမ သိသွား​မှာလည်း​ေြကာက်။ ငါ​ေတာ့​ တနှစ်လံုး​ သူငယ်တန်း​ေလး​ ဆင်း​ေနရ ​ေတာ့​မယ်ဟု ​ေတွး​ြပီး​ အလွန်အမင်း​ ထိတ်လန့်​မိပါသည်။
​ေနာက်တ​ေန့​ အတန်း​တက်ချိန်မှာ သူငယ်တန်း​ေလး​မှာပဲ ကျွန်​ေတာ် သွား​ထိုင် ​ေနရပါသည်။ ဆရာမြကီး​က အတန်း​ေရှ့​ စား​ပွဲ ကုလား​ထိုင်မှာ ထိုင်ရင်း​ ကျ​ေနာ့်​ကို လှမ်း​ြကည့်​ေနသည်ဟု ထင်ရသည်။ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ရဲရဲလည်း​ ြပန်မြကည့်​ဝံ့​။ အတန်း​ တက်စမို့​ အသံ​ေပါင်း​စံု ကျွတ်ကျွတ် ညံ​ေနပါသည်။ စား​ပွဲကို ြကိမ်ြဖင့်​ တဖျန်း​ဖျန်း​ ရိုက်ရင်း​ `တိတ်ြကစမ်း​´ဟု ဆရာမြကီး​က တချက်​ေအာ် လိုက်သည်။ အသံ​ေတွ အား​လံုး​ တိတ်သွား​ပါသည်။ ထို​ေန့​က အတန်း​သား​များ​ နာမည်စာရင်း​ မ​ေခါ်မီ ကျွန်​ေတာ့်​ ကို အရင်ဆံုး​ ​ေခါ်ပါသည်။
`​ေမာင်​ေကျာ် .. .လွယ်အိတ် ယူခဲ့​´ ဆို​ေသာ အသံက သိသိသာသာ ချိုသာ ​ေပျာ့​ေပျာင်း​ ​ေနပါသည်။ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ လွယ်အိတ် လက်ကဆွဲလျက် ဆရာမြကီး​ ​ေရှ့​မှာ ရပ်​ေနလိုက်သည်။
`သား​ …. အခု ဖဦး​ထုပ်ကို ​ေမ့​ေသး​လား​´
ကျွန်​ေတာ် ​ေခါင်း​ယမ်း​ မိလိုက်သမလား​ မ​ေြပာတတ်​ေတာ့​ပါ။ မ​ေမ့​ေတာ့​ဘူး​ဟု ​ေြဖလိုက်​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ အသံ တိုး​တိတ်လွန်း​ ​ေနတာကို​ေတာ့​ ​ေကာင်း​ေကာင်း​ မှတ်မိ​ေနပါသည်။ ြဖူ​ေဖွး​ ​ေဖာင်း​အိ​ေန​ေသာ မျက်နှာ​ေပါ်ရှိ မျက်မှန်ကိုင်း​ အနက်ြကီး​ေအာက်မှ ကျွန်​ေတာ့်​ကို စူး​စိုက် ြကည့်​ေန​ေသာ ဆရာမြကီး​၏ မျက်လံုး​များ​သည် အထူး​ပင် ​ေအး​ချမ်း​ လှပါသည်။ ကျွန်​ေတာ့်​ ရင်ထဲ ​ေရာက်သည်အထိ ခပ်ြမန်ြမန် ကူး​စက်နိုင်စွမ်း​ေသာ အံ့​ဩဖွယ် ​ေအး​ချမ်း​မှုမျိုး​ ြဖစ်ပါသည်။
ထိုအချိန်မှာ​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ် ဆရာမြကီး​၏ မျက်လံုး​များ​ကို ​ေရှာင်လွှဲရန် မတတ်နိုင်​ေတာ့​ပါ။ ကျွန်​ေတာ် ကိုယ်တိုင်က ဆရာမြကီး​၏ ​ေအး​ချမ်း​ေသာ မျက်လံုး​များ​ကို လိုလိုလား​လား​ ခံယူ​ေနမိပါသည်။ ထို​ေအး​ချမ်း​မှုသည် မိဘက သား​သမီး​အ​ေပါ်၊​ ဆရာက တပည့်​ အ​ေပါ်ထား​ေသာ ​ေမတ္တာပင် ြဖစ်​ေြကာင်း​ ကျွန်​ေတာ် အရွယ်​ေရာက်လာ​ေတာ့​ သိလာရပါသည်။ ကျွန်​ေတာ့်​ ရင်ထဲမှာ သူ့​အလိုလို တလှိုက်လှိုက် ြဖစ်လာပါသည်။
‘သား​…. စာြကိုး​စား​ ရမယ်​ေနာ်။ ဆရာဆိုတာ စာ​ေတာ်တဲ့​ လိမ္မာ​ေရး​ြခား​ ရှိတဲ့​ ​ေကျာင်း​သား​မျိုး​ကိုပဲ သူတို့​ ဘဝတ​ေလျှာက်မှာ ြကံုချင်၊​ ဆံုချင်ြကတာ​ေပါ့​။ ဆရာ​ေတွ ြကံုချင်၊​ ဆံုချင်တဲ့​ ​ေကျာင်း​သား​မျိုး​ ြဖစ်​ေအာင် ြကိုး​စား​ရမယ်​ေနာ်၊​ ြကား​လား​´
`ဟုတ်ကဲ့​´ ဟု ကျွန်​ေတာ် ​ေခါင်း​ညိတ်ပါသည်။ ကျွန်​ေတာ့်​ အသံက တုန်ယင် လှုပ်ရှား​ေနပါသည်။
`ကဲသွား​ .. သူငယ်တန်း​ြကီး​မှာ ြပန်ထိုင်၊​ ဟိုမှာ မင်း​သူငယ်ချင်း​ေတွက မင်း​ကို ​ေမျှာ်​ေနြကြပီ´
`​ေဟး​´ ခနဲ ​ေအာ်လိုက်သံ အတန်း​ထဲက တြပိုင်နက် ထွက်လာပါသည်။ ထိုအချိန် ကျွန်​ေတာ့်​ မျက်နှာ​ေပါ် မျက်ရည်​ေတွ ဘယ်လိုက ဘယ်လို ​ေရာက်လာမှန်း​ပင် မသိ​ေတာ့​ပါ။ ကျွန်​ေတာ် သူငယ်တန်း​ေလး​ မဆင်း​ရ​ေတာ့​ဘူး​။
အထက်ပါ အြဖစ်အပျက် က​ေလး​က ကျွန်​ေတာ့်​ အသည်း​ထဲမှာ တသက်လံုး​ စွဲသွား​ပါသည်။ ဘဝကိုလည်း​ များ​စွာ ​ေြပာင်း​လဲ ​ေစခဲ့​ပါသည်။ ထိုကတည်း​ကစ၍ ကျွန်​ေတာ် လူညံ့​တ​ေယာက် ြဖစ်မှာ အ​ေြကာက်ြကီး​ ​ေြကာက်သွား​ခဲ့​ပါသည်။ ​ေလှာင်​ေြပာင်​ေသာ၊​ အထင်အြမင်​ေသး​ေသာ၊​ မျက်လံုး​မျိုး​ေတွနှင့်​ ဘယ်​ေတာ့​မှ ရင်မဆိုင်ရ​ေအာင် ကျွန်​ေတာ် ြကိုး​စား​ ခဲ့​ပါသည်။
အခု​ေနအခါ ကျွန်​ေတာ့်​ ဘဝတ​ေလျှာက် ြဖတ်သန်း​ ခဲ့​ရသည်များ​ကို ြပန်လည် ​ေစာင်း​ငဲ့​ြကည့်​မည် ဆိုလျှင် ထင်း​ထင်း​ြကီး​ သိနိုင် ြမင်နိုင်​ေသာ အချက် တချက်ကို ​ေတွ့​ရပါသည်။ ​ေနရာတိုင်း​မှာ အများ​ထက် မသာသည့်​တိုင် အညံ့​ဆံုး​ ဆို​ေသာ ​ေနရာမျိုး​ကို ကျ​ေနာ် ဘယ်​ေတာ့​မှ မ​ေရာက်ခဲ့​ပါ။
ထိုသို့​ ြဖစ်​ေအာင်လည်း​ ကျွန်​ေတာ် အစဉ်အြမဲ ြကိုး​စား​ေနပါသည်။ ြကိုး​စား​ချင်စိတ် ​ေလျာ့​နည်း​သည့်​ အခါတိုင်း​လည်း​ ဗျည်း​နံပါတ် (၂၂) ဖ ဦး​ထုပ် အက္ခရာ​ေလး​က ြကိမ်နှင့်​ တို့​သလို ကျွန်​ေတာ့်​ကို သတိ​ေပး​ေလ့​ ရှိပါသည်။ ထိပ်ဆံုး​ ဆို​ေသာ ​ေနရာကို မရခဲ့​တာက​ေတာ့​ ကျွန်​ေတာ့်​ ပင်ကိုယ်ဉာဏ်ရည် ဉာဏ်​ေသွး​ အား​နည်း​မှုသာ ြဖစ်ပါသည်။
ဖဦး​ထုပ် အက္ခရာ​ေလး​ မ​ေပျာက်ပျက်သမျှ ဆရာမြကီး​ ​ေဒါ်စန်း​ရီလည်း​ ကျွန်​ေတာ့်​ နှလံုး​သား​ထဲက ဘယ်​ေတာ့​မှ ​ေပျာက်ပျက် လိမ့်​မည် မဟုတ်ပါ။ သို့​ေသာ်လည်း​ ဆရာနှင့်​ တပည့်​ဆိုသည်မှာ ကာလြကာသည်နှင့်​အမျှ တစစ ​ေမ့​ေပျာက် ​ေဝး​ကွာ သွား​တတ်သည့်​ သဘာဝ ရှိပါသည်။ အထူး​သြဖင့်​ မူလတန်း​မှာ ြကံုဆံုခဲ့​ဖူး​သည့်​ ဆရာ၊​ ဆရာမများ​ ဆိုလျှင် ထိုသဘာဝကပို၍ ​ေပါ်လွင်တတ် ပါသည်။
ထိုသဘာဝမျိုး​ြဖင့်​ ကျွန်​ေတာ်နှင့်​ ဆရာမြကီး​ ​ေဒါ်စန်း​ရီတို့​ ​ေဝး​ကွာ သွား​ခဲ့​ပါသည်။ ကာလအား​ြဖင့်​ ခန့်​မှန်း​ေြခ အနည်း​ဆံုး​ (၁၅) နှစ်​ေလာက် ြကာသွား​သည်ဟု ကျွန်​ေတာ် ထင်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် အတည်တကျြဖင့်​ ကျွန်​ေတာ် တနယ်တ​ေကျး​မှာ တာဝန် ထမ်း​ေနရချိန် ြဖစ်ပါသည်။
'မင်း​ …. ဒီတခါ​ေတာ့​ ခွင့်​ရလို့​ြပန်ြဖစ်ရင် တို့​ဆရာမြကီး​ ​ေဒါ်စန်း​ရီဆီ ​ေရာက်​ေအာင် သွား​လိုက်ပါဦး​ကွာ။ အသက်ကြကီး​ေတာ့​ ကျန်း​မာ​ေရး​လည်း​ မ​ေကာင်း​ရှာဘူး​။ စီး​ပွား​ေရး​လည်း​ မ​ေြပလည်ရှာဘူး​။ တပည့်​ေဟာင်း​ေတွ့​လည်း​ သိပ်ဝမ်း​သာ ရှာတယ်။ အဲဒီ ​ေန့​မျိုး​ဆိုရင် ဘာ​ေဆး​မှ မ​ေသာက်ရဘူး​။ သူ့​အလိုလို ​ေနလို့​ ​ေကာင်း​တယ်တဲ့​´။
မူလတန်း​တုန်း​က သူငယ်ချင်း​တစ်ဦး​နှင့်​ မ​ေမျှာ်လင့်​ဘဲ ဆံုစည်း​မိခိုက် အထက်ပါ စကား​များ​ ကျွန်​ေတာ့်​ကို ​ေြပာသွား​ခဲ့​ပါသည်။ အို… ကျွန်​ေတာ့်​စိတ်ထဲမှာ ကျွန်​ေတာ့်​ မိခင် ​ေနမ​ေကာင်း​ဘူး​ ဆိုတာကို ြကား​လိ်ုကရသလို ခံစား​ရသည်။ သွား​ရမယ်။ နယ်ြပန် ြဖစ်ရင် ဆရာမြကီး​ဆီ ​ေရာက်​ေအာင် သွား​ရမယ်ဟု စိတ်ထဲမှာ ​ေတး​ထား​လိုက်ပါသည်။ ဒါ​ေပမယ့်​ ကျွန်​ေတာ် ရုတ်တရက် မြပန် ြဖစ်ခဲ့​ပါ။ သူငယ်ချင်း​ ြဖစ်သူနှင့်​ ​ေတွ့​ြပီး​ နှစ်ဝက်ခန့်​ ြကာသည့်​ အချိန်​ေရာက်မှပင် နယ်သို့​ ြပန်ြဖစ်ခဲ့​သည်။
ကျွန်​ေတာ် ဆရာမြကီး​အိမ် ​ေရာက်သွား​ေတာ့​ ဆရာမြကီး​သည် ​ေခါင်း​ရင်း​ရှိ ခုတင်​ေလး​ေပါ်တွင် လဲ​ေလျာင်း​ ​ေနပါသည်။ အြခား​ ဘယ်သူမှလည်း​ မ​ေတွ့​ရပါ။ ဆရာမြကီး​ဟု ကျွန်​ေတာ် ခပ်တိုး​တိုး​ ​ေခါ်လိုက်​ေတာ့​ ဆရာမြကီး​ မျက်လံုး​က​ေလး​ အသာအယာ ဖွင့်​လာြကပါသည်။ အ​ေတာ်ပင် ​ေဝသီ မှုန်မှိုင်း​ ​ေနြကပါြပီ။
`ရှင် …. ´ တဲ့​။ ဆရာမြကီး​ ထူး​လိုက်ပံု ြကား​ရတာ ကျွန်​ေတာ့်​ စိတ်ထဲ တမျိုး​ြကီး​ ခံစား​ လိုက်ရပါသည်။
‘ဆရာမြကီး​ရဲ့​ တပည့်​ေဟာင်း​ပါ။ ဆရာမြကီး​ကို လာကန်​ေတာ့​ တာပါ´
`ဪ .. ​ေအး​ေအး​ .. .သား​ကလဲ သူ့​အိမ်နဲ့​သူ ခွဲ​ေနတယ်​ေလ။ ​ေြမး​က​ေလး​ တ​ေယာက်​ေတာ့​ ဆရာမြကီး​နဲ့​ အတူ လာ​ေနပါတယ်။ အခု ​ေဈး​သွား​ေန တယ်​ေလ´
ဆရာမြကီး​က သူ့​အထီး​ကျန်ဆန်မှုကို ဖံုး​ကွယ်လိုဟန်ြဖင့်​ ကျွန်​ေတာ်က ဘာမှ မ​ေမး​ရ​ေသး​ဘဲ ​ေြပာ​ေနပါသည်။ ြပီး​ေတာ့​ ခုတင် ​ေဘး​ကပ်လျက် ပက်လက် ကုလား​ထိုင်က​ေလး​ေပါ် ​ေရွှ့​၍ ထိုင်ပါသည်။
ကျွန်​ေတာ် ဆရာမြကီး​ကို ကန်​ေတာ့​လိုက်ြပီး​ ကျွန်​ေတာ့်​ကို​ေကာ ဆရာမြကီး​ မှတ်မိရဲ့​လား​ဟု ​ေမး​လိုက်သည်။ ဆရာမြကီး​က ကျွန်​ေတာ့်​ကို စူး​စိုက်ြကည့်​ေနပါသည်။ နှုတ်ခမ်း​ေတွက တရွရွ လှုပ်ရှား​ေနြကပါသည်။ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ဆရာမြကီး​ကို ​ေငး​ြကည့်​ရင်း​ ရင်​ေတွ တထိတ်ထိတ် ခုန်လာပါသည်။
ဆရာမြကီး​၏ ​ေဖျာ့​ေတာ့​ အား​နည်း​လှ​ေသာ နှုတ်ခမ်း​ေပါ်မှာ အြပံုး​တစ ​ေပါ်လာြပီး​ အ​ေရြပား​က​ေလး​များ​ ပဲြကီး​ခွံတွန့်​သလို တွန့်​ေန​ေသာ လက်​ေချာင်း​များ​ြဖင့်​ ကျွန်​ေတာ့်​ပခံုး​ကို လှမ်း​ကိုင်ပါသည်။ ြပီး​ေတာ့​ ပုစ္ဆာတပုဒ်၏ အ​ေြဖမှန်ကို ရသွား​ေသာ ​ေကျာင်း​သား​ေလး​ တစ်​ေယာက်သဖွယ် အား​တက်သ​ေရာ အသံြဖင့်​ `မင်း​…. ဖဦး​ထုပ်မှုတ်လား​၊​ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား​`တဲ့​။
ထိုအခါ​ေတာ့​ ဘယ်လို ြဖစ်သည်မသိ၊​ မငိုပါဘဲနှင့်​ ကျွန်​ေတာ့်​ မျက်နှာ​ေပါ် မျက်ရည်​ေတွ အလိုလို ​ေရာက်လာြကပါသည်။ ကျွန်​ေတာ် ဆရာမြကီး​၏ ​ေြခဖမိုး​ေပါ် မျက်နှာအပ်ရင်း​ မျက်ရည်များ​ြဖင့်​ ပွတ်သပ် နမ်း​ရှံု့​ ​ေနမိပါ​ေတာ့​သတည်း​။
မင်း​ြကီး​ညို ​ေရွှရတု မဂ္ဂဇင်း​ (၂၀၀၂)
အ​ညွန်း​။​ ​။​ ​ေမာ​က္ခ​ပ​ညာ​ေရး​မ​ဂ္ဂ​ဇင်း